Vehivavy soedoà no nipaoka ny bisy tao amin'ny tanàna mpifindra monina soedoà noho ny fanaovana “akanjo vitsy”
Home » Toerana fitsangatsanganana » Vehivavy soedoà no nipaoka ny bisy tao amin'ny tanàna mpifindra monina soedoà noho ny fanaovana “akanjo vitsy”
Eo anivon'ny Soedaheatwave mangatsiaka (hoy ny fampitam-baovao avy eo an-toerana fa nahitana maripana toy ny… 27 degre Celsius, na 80 degre Fahrenheit) ny firenena Skandinavia, dia niditra bus i Amanda Hansson Malmo, tanàna Suède, izay misy vondrom-piarahamonina mpifindra monina marobe, manao pataloha fohy mifanaraka amin'ny toetr'andro sy ambony camisole. Tapaka ihany ny fandehanany bus rehefa avy nantsoin'ny mpamily tsy nampoizina izy.
Notantarain'i Hansson tao amin'ny Facebook ny fihaonana, nilaza izy fa nilaza taminy ilay mpamily fa “vitsy ny akanjo” ary tokony “hanarona” izy. Nilaza ny mpiasan'ny fitaterana fa “nanitsakitsaka ny kaody fiakanjon'ilay orinasa” ny fitafiany.
Nanohitra ilay baiko ilay tovovavy talohan'ny nivoahany ny bus.
"Nanontany azy aho hoe karazana firaisana ara-nofo inona no tadiaviny hisintomana, fa nanohy nilaza fotsiny izy fa tokony hanafina ny tenako aho," hoy i Hansson tamin'ny gazety Kvällsposten. “Inona no manome zon'ny mpamily bus hanapa-kevitra raha manana 'fitafiana tsy mendrika' ny vehivavy?” hoy izy nanontany.
Nahazo anjara sy fanehoan-kevitra an'arivony tao amin'ny Twitter sy Facebook ny fitsapana nahazo azy, izay niteraka ny fahalianan'ny media an-toerana.
Rehefa vita ampahibemaso ny tantarany dia nifona ny tompon'andraikitra misahana ny fitaterana ao an-toerana sy ilay mpitatitra bus. Naato tamin'ny asany ny mpamily teo am-piandrasana ny famotorana azy.
Ny talen'ny fifamoivoizana eo an-toerana Linus Erixon avy hatrany dia niresaka momba ny nofy ratsy PR. "Nisy zavatra tsy nety," hoy izy nanoratra tao amin'ny Twitter. "Mazava ho azy fa raisina an-tsambo ny olona ao anaty bus sy fiaran-dalamby miakanjo fohy sy camisole."
Nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao soedoà izy fa ny mpamily dia tsy manao fihetsika tsy manao "antom-pinoana na politika."
Nanamafy ny orinasam-pitaterana fa tsy misy ny politika mandrara ny vehivavy tsy hanao fitafiana sasany, ary nanenina noho ny "fitsaboana diso" azon'i Hansson.
Nankasitraka ny volavolan-dalàna fanatsarana fotodrafitrasa ny komity amerikanina
UNIGLOBE Travel dia mandray ny Global Partner vaovao any Scotland, UK
31 segondra lasa izay